လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Tech tips လေးများ – DigitalTimes.com.mm
200 Shares 120 Views
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Tech tips လေးများ
ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ သိလည်းသိထားသင့်တဲ့ နည်းပညာ hacks လေးတွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Google ကနေလည်း Timer ပေးလို့ရပါတယ်။ Google ကိုသွားပြီး search bar မှာ “Set Timer (x) Minutes” လို့ရိုက်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
၂. ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ ကြော်ငြာတွေတက်မလာစေချင်ဘူးဆိုရင် “Airplane mode” ကို On လိုက်ပါ။ (offline game များအတွက်)
၃.ကွန်ပျူတာနဲ့ browser သုံးတဲ့အခါ မတော်တဆများဖွင့်ထားတဲ့ tabs တွေကို ပိတ်မိလိုက်တယ်ဆိုရင် [Ctrl + Shift + T] ဆိုတဲ့ shortcut ကိုသုံးပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ရပါတယ်။
၄. ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကလည်း တကယ်ကိုနည်းနေပြီ သုံးဖို့ကလည်းလိုနေတယ်ဆိုရင် မပိတ်ဘဲ “Airplane Mode” ကိုပဲဖွင့်လိုက်ပါ။
၅. FutureMe.org က ကိုယ်ကနေ အနာဂတ်မှာရှိနေမယ့်ကိုယ့်ဆီစာပေးပို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက YouTube လို ဆိုဒ်တွေကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် Google Chrome ရဲ့ Incognito Mode ကနေဝင်ပြီး access လုပ်လို့ရပါတယ်။
၇. ဟိုတယ်မှာရောက်နေချိန် ဖုန်းကလည်းအားကုန်နေပြီဆိုရင် TV တွေမှာ USB Plugin တွေရှိတာမမေ့လိုက်ပါနဲ့။
၈. iPad Charger နဲ့ iPhone တွေကိုအားသွင်းရင် ပိုမြန်ပါတယ်။
၉. “PDF” ဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလိုက်ပြီး နောက်မှာ “exe” ဆိုတဲ့ extension လေးကိုတွေ့ရင် ဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ သူကအမြဲတမ်းဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့ဝင်လာတတ်လို့ပါပဲ။
၁၀. YouTube ကနေ ဗီဒီယိုတစ်ခုဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် www. နဲ့ YouTube Video URL ကြားမှာ “ss” ဆိုတာလေး ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဒေါင်းလို့ရပါပြီ။
၁၁. ဘက်ထရီတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းတာ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ၂ဆပိုခံစေပါတယ်။
၁၂. အွန်လိုင်းကနေ ဈေးအပေါ်ဆုံးလေယာဉ်လတ်မှတ်တွေကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် Browser ရဲ့ Incognito Mode ကိုသုံးပါ။ ဆိုဒ်တစ်ခုကို အကြိမ်များစွာဝင်ဖူးတယ်ဆိုရင် ဈေးတွေတက်တတ်လို့ပါ။
၁၃. iPad/ iPhone က သီချင်းတွေအကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာထဲကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် DeTune ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပါ။
၁၄. ကျောင်းစာစီစာကုံးတွေအတွက် အချက်အလက်တွေရှာချင်ရင် Google.com ကိုမသုံးဘဲ Scholar.google.com ကိုပဲသုံးပါ။ သူကပိုသင့်တော်တဲ့အချက်အလက်တွေပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၅. အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဖုန်းကိုဘယ်နားထားမိမှန်းမသိ vibration mode လည်းထားထားမိတယ်ဆိုရင် Google ကိုသွား Google အကောင့်ကို Sign Up လုပ်ပြီး Google Play > Android Device Manager > “Ring” လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ဒီအချက်လေးတွေက နည်းပညာနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့လူတွေအတွက် အနည်းနဲ့အများတော့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထဲက ကိုယ်ဘယ်နှစ်ခုလောက်ကိုများ စမ်းဖူးပြီလဲ??
Ref : alltechtips&tricks
လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ Tech tips လေးမြား
ဘယျအခြိနျ ဘယျလိုအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ပိုပွီးရိုးရှငျးလှယျကူအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျတဲ့ သိလညျးသိထားသငျ့တဲ့ နညျးပညာ hacks လေးတှအေကွောငျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. Google ကနလေညျး Timer ပေးလို့ရပါတယျ။ Google ကိုသှားပွီး search bar မှာ “Set Timer (x) Minutes” လို့ရိုကျလိုကျရငျ ရပါပွီ။
၂. ဂိမျးဆော့နတေဲ့အခြိနျမှာ ကွျောငွာတှတေကျမလာစခေငျြဘူးဆိုရငျ “Airplane mode” ကို On လိုကျပါ။ (offline game မြားအတှကျ)
၃.ကှနျပြူတာနဲ့ browser သုံးတဲ့အခါ မတျောတဆမြားဖှငျ့ထားတဲ့ tabs တှကေို ပိတျမိလိုကျတယျဆိုရငျ [Ctrl + Shift + T] ဆိုတဲ့ shortcut ကိုသုံးပွီး ပွနျဖှငျ့လိုကျရငျရပါတယျ။
၄. ဖုနျးရဲ့ဘကျထရီကလညျး တကယျကိုနညျးနပွေီ သုံးဖို့ကလညျးလိုနတေယျဆိုရငျ မပိတျဘဲ “Airplane Mode” ကိုပဲဖှငျ့လိုကျပါ။
၅. FutureMe.org က ကိုယျကနေ အနာဂတျမှာရှိနမေယျ့ကိုယျ့ဆီစာပေးပို့ပေးလို့ရမှာဖွဈပါတယျ။
၆. ကိုယျ့ကှနျပြူတာက YouTube လို ဆိုဒျတှကေိုပိတျထားတယျဆိုရငျ Google Chrome ရဲ့ Incognito Mode ကနဝေငျပွီး access လုပျလို့ရပါတယျ။
၇. ဟိုတယျမှာရောကျနခြေိနျ ဖုနျးကလညျးအားကုနျနပွေီဆိုရငျ TV တှမှော USB Plugin တှရှေိတာမမလေို့ကျပါနဲ့။
၈. iPad Charger နဲ့ iPhone တှကေိုအားသှငျးရငျ ပိုမွနျပါတယျ။
၉. “PDF” ဖိုငျတဈခုဒေါငျးလိုကျပွီး နောကျမှာ “exe” ဆိုတဲ့ extension လေးကိုတှရေ့ငျ ဖိုငျကိုဖကျြပဈလိုကျပါ။ သူကအမွဲတမျးဗိုငျးရပျဈအနနေဲ့ဝငျလာတတျလို့ပါပဲ။
၁၀. YouTube ကနေ ဗီဒီယိုတဈခုဒေါငျးခငျြတယျဆိုရငျ www. နဲ့ YouTube Video URL ကွားမှာ “ss” ဆိုတာလေး ရိုကျထညျ့ပေးလိုကျရငျ ဒေါငျးလို့ရပါပွီ။
၁၁. ဘကျထရီတှကေို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာသိမျးတာ ဘကျထရီသကျတမျးကို ၂ဆပိုခံစပေါတယျ။
၁၂. အှနျလိုငျးကနေ ဈေးအပျေါဆုံးလယောဉျလတျမှတျတှကေိုဝယျခငျြတယျဆိုရငျ Browser ရဲ့ Incognito Mode ကိုသုံးပါ။ ဆိုဒျတဈခုကို အကွိမျမြားစှာဝငျဖူးတယျဆိုရငျ ဈေးတှတေကျတတျလို့ပါ။
၁၃. iPad/ iPhone က သီခငျြးတှအေကုနျလုံးကို ကှနျပြူတာထဲကိုပွောငျးခငျြတယျဆိုရငျ DeTune ဆိုတဲ့ပရိုဂရမျကိုသုံးပါ။
၁၄. ကြောငျးစာစီစာကုံးတှအေတှကျ အခကျြအလကျတှရှောခငျြရငျ Google.com ကိုမသုံးဘဲ Scholar.google.com ကိုပဲသုံးပါ။ သူကပိုသငျ့တျောတဲ့အခကျြအလကျတှပေေးပါလိမျ့မယျ။
၁၅. အိမျထဲမှာကိုယျ့ဖုနျးကိုဘယျနားထားမိမှနျးမသိ vibration mode လညျးထားထားမိတယျဆိုရငျ Google ကိုသှား Google အကောငျ့ကို Sign Up လုပျပွီး Google Play > Android Device Manager > “Ring” လုပျပေးလိုကျရငျရပါပွီ။
ဒီအခကျြလေးတှကေ နညျးပညာနဲ့ထိတှနေ့ရေတဲ့လူတှအေတှကျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ အသုံးဝငျပါလိမျ့မယျ။ ဒီထဲက ကိုယျဘယျနှဈခုလောကျကိုမြား စမျးဖူးပွီလဲ??